शनिवार पनि भनेन मेयर हर्क सम्पाङले कार्यालयमा भेटिए , सुने पिडितहरूको यस्ता समस्याहरू.. – Ap Nepal
शनिवार पनि भनेन मेयर हर्क सम्पाङले कार्यालयमा भेटिए , सुने पिडितहरूको यस्ता समस्याहरू..
May 29, 2022 111
धरानः धरानको बराह वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्नो वचत पैसा फिर्ता नपाई पीडित बनेका हरुले शनिवार मेयर हर्क सम्पाङ राईलाई भेटेका छन् ।
करोडौं रकम राखेका बचतकर्ताले आफ्नो पैसा नपाए पछि संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
वचतकर्ताहरुको समस्या सुन्न शनिबार पनि कार्यालय पुगेका सम्पाङले आफु पनि पहिले पीडितकै पक्षमा रहेको तर अब कानुन र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसेर पीडितको पक्षमा बसेर काम गर्ने बताए ।
संघर्ष समिति बनाएका वचतकर्ताहरुले मेयर साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आफुहरुको पैसा फिर्ता गराउन पहल गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । साथै उनीहरुले बराहका सञ्चालक समितिमा बसेकाहरुलाई नेपाल बाहिर जान रोक लगाउनको लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
मेयर सम्पाङसँगको भेटमा संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपालीले बराहका सञ्चालकहरुलाई जेठ १८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिए । जेठ १८ गते सम्ममा वचतकर्ताहरुको समस्या हल नभए बराहको भानुचोकस्थित कम्प्लेक्स, धनकुटे रोडस्थित बराह भवन र भेडेटारको व्यपारिक भवन बन्द गराउने उनले चेतावनी दिए ।
सहभागीहरुसँगको भेट्मा मेयर साम्पाङले बराह सहकारी संघर्ष समितिको कुरा सुनिसके पछि कानुन र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
आफु धरानबासीको सबै खालको दुःखमा सँगै रहेको सुनाउदै मेयर सम्पाङले क्षेत्राधिकार भित्र रहेर न्याय दिलाउने बताए । ‘पहिले म आन्दोलन मै थिए तर अहिले कानुनी अधिनमा छु। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर तपाईंहरुलाइ सहयोग गर्छु ।’ मेयर राइले भने ।
बराह पीडितहरुलाई हिजो पनि साथ दिएको स्मरण गराउदै मेयर साम्पाङले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनु पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । ‘वास्तविक पीडित कतिजना हुनुहन्छ ? कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तथ्यांक संकलन गर्नुस् । हरेक दुःखमा साथ छुँ’, मेयर साम्पाङले भने,‘नियम कानुन अनुसार जान्छौ । उहाँहरु पीडित हुनुहुन्छ, न्याय दिनु पनि स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो, चुप लागेर बस्दैनौ ।’मेयर को भनाइ थियो ।-पर्देशपोटलबाट
Prevधरानका मेयर हर्कराज राई र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्दे’न बीच भे’ टघाट, के राई पार्टी प्रवेश गर्न ला ग्या हुन् त ?
Nextखराब मौसमका कारण सम्पर्क विहीन जहाजको खोजीमा समस्या